ပထမလူ၊ ၊ ဟေ့ မင်း မိန်းမ မယူသေးဘူးလာ himn himn
ဒုတိယလူ၊ ။ မစဉ်းစားရဲသေးပါဘူးကွာ၊ don't don't
ပထမလူ၊ ။ဟာ……ဒါများဘာခက်တာမှတ်လို့၊ ယူပြီးယောက္ခမအိမ်ပေါ် တက်နေလိုက်၊ နောက်မှ စုဆောင်းပြိးကိုယ့်ဟာကိုယ် အိမ်ခွဲဆင်းကြပေါ့၊
ဒုတိယလူ၊ ။ အဲဒါ ခက်တာပေါ့၊ ငါတက်နေမယ့် ယောက္ခမတွေတောင် သူတို့ရဲ့ယောက္ခအိမ်မှခုထိကပ်နေကြတုန်းကွ၊
ပိုင်ရှင်ကိုမြ။ ။ ဟာ…..ကိုလှပါလား၊ အတော်ပဲဗျို့၊ ခင်ဗျားဟိုတစ်နေ့က ကျုပ်ဆီက ငှားသွားတဲ့ ဖောင်တိန်လေးပြန်လိုချင်လို့၊
ကိုမြ၊ ။ ကျနော် က ပြန်မယူချင်ပါဘူး၊ ခုအဲဒီဖောင်တိန်ပိုင်ရှင်က ကျနော်ကို လာတောင်းနေလို။
လူနာ။ ဆရာ ကျွန်တော်အားလပ်ရက်တစ်လရပါတယ်။ အဲဒါ ဒီတစ်လအတွင်း ကျွန်တော်
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းကုစားလို့ ရပါ့မလား သိချင်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ ခင်ဗျား မျက်နှာချင်း
ဆိုင်ကဆေးခန်းကို သွားပြရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
လူနာ။ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ။ ကျွန်တော် ဆရာ့ ဆီကိုပဲ လာတာပါ။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် က တိရစ္ဆာန် ဆေးကု ဆရာဝန်ပါ။
လူတွေကိုကျွန်တော် မကု ပါဘူး ခင်ဗျ။
လူနာ။ ကျွန်တော် ဆရာ့ ကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဆရာ့ ဆီကို လာတာပါ။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ခင်ဗျား က
ကျွန်တော့်လို စကားပြောတယ်၊ ကျွန်တော့် လိုတွေးတယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားလည်း
လူပဲ လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
လူနာ။ ကျွန်တော် ကိုယ့် ကိုကိုယ် လူဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိပါတယ် ဆရာ။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် ရှင်းပြတာကို ဆရာ နားထောင်ပါဦး။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်။ ကောင်းပြီလေ။ ပြောပါဦး။
လူနာ။ ကျွန်တော် ဟာ ခွေးတစ်ကောင်လိုပဲ အလုပ် အကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ အိပ် ပါတယ်။
မနက်ရောက်ရင် မြင်းတစ်ကောင်လို ပဲ ထရပါတယ်။
အလုပ်ကို တော့ သမင် တစ်ကောင်လို ပြေးသွား ရပါတယ်။
အလုပ်ထဲမှာ တော့ တစ်နေကုန် မြည်း တစ်ကောင်လို လုပ် ရပါတယ်။
ပြီးတော့ဆယ့်တစ်လ လုံးလုံး နားရက် မရှိပဲ နွားတစ်ကောင်လို ရုန်းရပါတယ်။
သူဋ္ဌေးရှေ့မှာတော့ အမြဲတမ်း အမြှီးလေးကုပ်ထားရပါတယ်။
အားချိန်လေးများနည်းနည်း ရရင်တော့ မျောက် တစ်ကောင်လို ပဲ သားတွေ
ဆရာကလွဲရင် ကျွန်တော် ဘယ်သူမှ ကုပေးလို့ ရမှာ မဟုတ်ဖူး။
ရဲဝန်ထမ်း တယောက် သည် တပတ်လုံး ညဆိုင်း တာဝန်ကျ နေရာ က တရက်မှာ သူ
အလုပ်စောပြီး တာနဲ. အိမ်ကို စောစောပြန်လာ ပါတယ်။ မနက် ၂ နာရီ
ခါတိုင်းထက်၎နာရီ စောပြီး ပြန်လာပါတယ်။
ရဲဝန်ထမ်းဟာ သူ.မိန်းမ အိပ်နေတာ အိပ်ရေးပျက်မှာ ဆိုးသည်နှင်.
မီးမဖွင်.အမှောင်ထဲမှာတင် ယူနီဖောင်း အင်္ကျီ ကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး
ကိုယ်လုံးဗလာဖြင်. ခုတင်ပေါ် တက်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာသူ.မိန်းမ က ကယောင်းကတန်းနှင်.
မိန်းမ- “ယောင်္ကျား ရေ ဒီမှာ ခေါင်းကိုက်လိုသေတော.မယ် ။ ဟို ၂၄ နာရီ
ဆေးဆိုင်ကခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးလေး သွားဝယ်ပေးပါလား ဟင်”
ရဲဝန်ထမ်း- “၀ယ်ပေးရမှာပေါ. မိန်းမရယ်၊ ခဏလေးစောင်.နော်”
လို.ဆိုပြီး ကမန်းကတန်း အင်္ကျီ ကောက်ဝတ်ပြီး ဆေးဆိုင်ကိုသွားပါတော.တယ်။
- “ခင်ဗျား က ဟိုဘက်မြို.နယ် က ရဲမဟုတ်လား”
- “ဟုတ်တယ်လေ ဘာလို.လဲ”
- “ဒါဆို ခင်ဗျား ဘာလို. မီးသတ်သမား ၀တ်စုံကြီး ၀တ်ထားရတာလဲ”
Posted by shwewunyatana at 5:54 AM
mstint October 19, 2011 at 4:50 PM
ဟာသလေးတွေဖတ်ပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရယူသွားပါတယ် ဘုရား။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 19, 2011 at 8:10 PM
မနက်ခင်း စိတ်အပန်းဖြေ ဟာသလေးတွေ ဖတ်သွားပါတယ် ဘုန်းဘုန်း။
ဘုန်းဘုန်းလဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
မိစံ October 20, 2011 at 3:30 AM